Ụbọchị My Pet » 5 Mere Pet nwe na-mmeri Na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị World
E nwere ọtụtụ ihe mere Pita nwe ndị dị otú ahụ ihe ọma catches na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa. Mgbe niile a Pita nwe-egosiputa nile ndị dị mkpa qualites nke ndị mmadụ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa anya n'ihi na dị nnọọ site owning a Pita. Ọ na-egosi ụdị onye ị bụ, enhances gị ịchọta ịhụnanya nke ndụ gị! Ebe a bụ nnọọ ise nke ọtụtụ àgwà nke Pita nwe-egosi n'èzí ụwa:
Iji nwere a Pita onye nwere na-enwe obiọma. Inye oge gị, na ịhụnanya na-a Pita na-egosi na i nwere a ịdị nro na a obiọma banyere gị. Ọ na-egosi na ị na-adịghị nanị na-eche banyere onwe gị. Ị nwere ike na-eche banyere ndị ọzọ. Mgbe niile ị na-eche echiche nke a dị ndụ na-eku ume e kere eke kwa ụbọchị si.
Anu ulo nwere ike ha mischievous oge na otu nwere ka a otutu ime na ha karịsịa na ọtụtụ nkịta. Ọ bụghị ihe niile ma ọtụtụ. Anu ulo nwaa gị ndidi mgbe ụfọdụ dị ka ezigbo mma dị ka ha bụ ndị na eziokwu na i nwere ike obibi ya na-egosi na ndidi bụ omume ọma nke i nwere.
Sense nke Dịịrị
Kemgbe a Pita nwe pụtara na ị chọrọ ka na-akpata. Ahụ ike na ọdịmma nke a mara ezigbo mma na anụmanụ dị gị aka na ị chọrọ na-ekwusi ike onwe gị ibu ọrụ a na-eme ka n'aka na nke a Pita bụ na naa. Nke a na-egosi na atugharị a n'echiche nke ike na-na-ọrụ na iji hụ na ihe niile bụ ihe na naa.
Iji nwere a Pita ị ga-enwe a ụfọdụ ego nke mkpebi siri ike. Ị maara na ị na-na isi nzọụkwụ ná ndụ gị nke gụnyere a otutu ọrụ otú ị ga-a onye kpebisiri ike ịhụ ihe site na-na ịma aka ndị ọhụrụ na a ga-aga nke ọma.
Ndị isi ihe a na-ahụrụ n'anya nwe-egosi bụ na i nwere ikike na-egosi ịhụnanya. Ọ na-egosi na ị na-adịghị oyi na abụba n'ihi na ị na-egosi ịhụnanya n'ebe gị Pita. Nke a na-egosi na ị bụ onye na-ahụ n'anya na onye nwere ike ịbụ adụ, nwayọọ, ilekọta na-ahụ n'anya na onye ọ bụla kechioma ka i.